April 2020 – Page 2 – Kichuu
Ethiopia consults on telecoms licensing rules (mobileworldliv)–The Ethiopian Communications Authority opened a two week consultation on proposed rules for licensing new entrants into the country’s telecoms sector, alongside related directives on consumer rights and dispute [Read More]
Dinquu Dayyaasaa! Duulli Abiyyii fi Daanieel Kibrat Oromummaa fi sabboonummaa cabsuuf jalqaban guyyuma guyyaan guddataa fi bal’ataa deemaa jira. Duula kana keessaa tokko olola aangawootni Bilxiginnaa (Badhaadhina) kanneen akka #Hailu_Adugna Sooressaa fi Abbaa Hiyyeessaa Dinquu Dayyaasaa irratti [Read More]
Bilxiginnaa: This is happening in Ethiopia under the alleged winner of peace, Abiy Ahmed! Warri Bilxiginnaa namoota Naqamtee irraa qabanii hidhan gara Ambootti dabarsanii jiru. Amma Amboo irratti walitti qabanii Baatuutti fe’uuf jiru. Hotelootni Finfinnee [Read More]
The Ethiopia’s self-appointed PM King Dr Abiy Ahmed has got yet another self appointed superstitious contender from the Amhara region who calls herself a Queen
The Ethiopia’s self-appointed PM King Dr Abiy Ahmed has got yet another self appointed superstitious contender from the Amhara region who calls herself a Queen 👸 This is an absolute joke…but it is a real. Her [Read More]